मेरो माया र संसार नै संगित हो : सिर्जु अधिकारी / गायिका, मोडल - Uttargaya Daily
उत्तरगया दैनिक	२०७५ साउन २०
नेपाली साँगितिक क्षेत्रमा ‘मेरो फिगर कोकाकोला’,‘प्यार प्यार’ , ‘छेकेन जामाले ’ ,‘फुच्ची फुच्ची’ ‘मायालाई जिन्दाबाद’ जस्ता आधुनिक, पप र दोहोरी गीतहरु अत्यन्त चर्चित छन् । यी गीतहरुले दर्शक स्रोताहरुको मा मात्र जितेको छैन यसका स्रस्टाहरुलाई नेपाली साँगितिक आकाशमा चर्चित समेत बनाएको छ । यी चर्चित गीतहरुकी गायिका र मोडल हुन सिर्जु अधिकारी । बिगत १० बर्ष देखि नेपाली साँगितिक क्षेत्रमा क्रियाशिल सिर्जुले गायिका, मोडल र संगितकारको रुपमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेकी छिन् । रामचन्द्र काफ्लेले गाएको ए कान्छी रानीबनमा हावा सररबोलको गीतमा मोडलिङ गरेर सुरु भएको सिर्जुको साँगितिक यात्रामा उनले सयौं गीतहरुमा आफ्नो श्वर र अभिनय क्षमता प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् । कुलेन्द्र बिक संग मिलेर गाएको ‘मायामा हाल उजुरी’बाट साँगितिक क्षेत्रमा स्थापित भएकी सिर्जु दोहोरी, पप ,आधुनिक सबै गायनमा पोख्त छिन् । नेपाली कलाकारीता क्षेत्रमा बहुमुखी प्रतिभाकी खानी मानिने सिर्जुले पूर्णकला बिसी र रामजी खाँणको ‘खाडी मुलुक’ एल्वममा गरेको जीवन्त अभिनयले धेरै दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएको थियो । प्रस्तुत छ : नेपाली कलाकारीता क्षेत्र भित्र बौद्धिक व्यक्तित्व, सुन्दरताकी खानी र मिलनसार स्वभावको छवी बनाउन सफल दाङ तुलसीपुरकी सिर्जुसंग नुवाकोट टाईम्सले गरेको कुरानकानीको सारसंक्षेप :
कसरी आकर्षित हुनुभयो यो क्षेत्रमा ?
मेरो आमा स्वयं गीत लेख्ने र गाउने गर्नुहुन्थ्यो,दिदी र बहिनी पनि यही लयलाई पछ्याईरहेका थिए ।बास्तवमा भन्नुपर्दा गीत संगित मेरो बंशाणुगत गुण नै हुनुपर्छ । यही गुण र सानै देखिको रहरका कारण म आज यो क्षेत्रलाई आफ्नो जीवनको एउटा महत्वपुर्ण अध्याय बनाएर अघि बढिरहेकी छु ।
कस्तो रहेछ त यो क्षेत्र ?
रामै छ ।तर मिहिनेत भने एकदमै आवश्यक छ । १० बर्ष लामो संघर्षपछि दर्शकहरुले अत्यन्त रुचाएको अवस्था भोगेको सन्दर्भमा यो क्षेत्र मिहिनेतीहरुकै रहेछ भन्ने पनि लागिरहेछ ।
गीत गाएको ,मोडलिङ गरेको भरमा वाँच्न सकिने अवस्था रहेछ त ?
म म्युजिक कम्पोज पनि गर्छु र पेशामा व्यस्त पनि भएकाले समस्या भोगेकी छैन । तर नढाँटी भन्ने हो भने स्टेज प्रोगामहरु नपाउँदा भने आर्थिक रुपमा सहज अवस्था नरहन सक्छ ।
समस्या चाहीँ कत्तिको छन् यो क्षेत्रमा ?
समस्या मुक्त क्षेत्र त कहाँ नै पो होला र ? लगानी गरेर म्युजिक भिडियो निकाल्यो ,त्यसको प्रतिफल आर्थिक दृष्टिले शुन्य हुनेगर्छ । राज्यबाट सेवा सुबिधाको त कुरै छाडौं,गीतको रोयल्टी समेत पाउने अवस्था छैन ।
महिला कलाकारहरुलाई त झनै समस्या छ भनिन्छ नि ?
मेरो बिचारमा महिलाले समस्या भोग्नु नपरेको कुनै क्षेत्र नै छैन । तर कलाकारीता क्षेत्रमा अलि बढी नै हल्ला हनेगर्छ । बाहिर आएजस्तो समस्या छ जस्तो मलाई चाहीँ लाग्दैन ।
महिला हिँसाका कुराहरु त सार्वजनिक भईरहेका हुन्छन् नि ?
यसमा पनि सत्य भन्दा हल्ला नै बढी देख्छु म त । आफू संयमित भएर पेशामा लाग्ने हो भने कसैलै पनि यस्तो बिषयको चर्चा नै गर्नुपर्देन ।
यसमा महिला स्वयंको दोष चाहीँ कत्तिको पाउनुहुन्छ ?
पक्कै पनि महिलाको चाहीँ दोष नै नदेख्नु गलत हुनसक्छ । बिशेष गरेर छोटो समयमा चर्चामा आउन जे पनि गर्न तयार हुने प्रबृत्ती यो क्षेत्रमा हानिकारक रुपमा प्रबेश गरिरहेको छ । तर मेरो बिचारमा आफु ठीक भए कसैले टेढो नजर लगाउनै सक्दैन । लोकदोहोरी क्षेत्रमा छाडापन बढ्दै गयो भनिन्छ नि ? बढेको कुरालाई छैन कसरी भन्नु ।
कसरी रोक्ने त छाडापन ?
सबभन्दा पहिला त कलाकारले म व्यक्ति मात्र हैन समाजको प्रतिबिम्व पनि हुँ भन्ने सोच बनाउनु प¥यो । अनि सेन्सर बोर्डले कडाईका साथ नियमन गर्ने र दर्शक स्रोताहरुले प्रोत्साहन नगर्ने अवस्था बन्यो भने बिकृतीमा रम्नेहरु बिस्मृतीमा पुग्छन् ।
कस्तो पहिरनमा प्रस्तुति दिन रुचाउनुहुन्छ ?
म सामान्य पहिरन मै हुन्छु । तर कलाकार भएपछि समय र परिस्थिती सुहाउँदो पहिरनमा त अभ्यस्त हुनैपर्छ ।
आफ्नो प्रस्तुति चाहीँ कस्तो लाग्छ आफैंलाई?
ठीकै लाग्छ ।अझै राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थापनि देखिरहेकी हुन्छु ।
दर्शकहरुको प्रतिक्रिया चाहीँ कस्तो पाउनु भएको छ ?
एकदम राम्रो साथ पाएकी छु दर्शकहरुबाट ।
परिवारको साथ कत्तिको पाउनु भएको छ ?
एकदमै ।निरन्तर हौसला र उत्प्रेरणा मिलिरहेको छ परिवारबाट ।
आत्माको पुकार,जीवन र जगत अड्याउने प्रमुख अस्त्र ।
यती सुन्दर मान्छेको मायालु छ त भनेर सोधौं ?
सोधी त हाल्नु भयो ! तर म करियर बनाउने कुरामै केन्द्रित छु । यो बिषयमा मेरो ध्यान नै छैन । करियर बनाउने समयमा कसैसंग रिलेशनमा बसेर किन टेन्सन लिनु । संगित नै मेरो माया र संसार हो अहिलेका लागि ।
प्रेम प्रस्ताव त टन्नै आउलान?
आउँछन् अलि अलि । तर म सबैलाई फ्यानको रुपमा हेर्छु र उहाँहरुबाट पनि त्यस्तै ब्यवहारको अपेक्षा गर्छु । यो क्षेत्रमा आउँदा कम्तीमा यसको बारेमा आधारभूत ज्ञान हुनु जरुरी छ । यो क्षेत्रमा धैर्यता जरुरी आवश्यक छ र आत्तिएर प्रगति हुँदैन भन्ने सोच राखेर क्रियाशिल हुन सक्नुपर्छ ।यसो भएमा प्रतिभा भएकाहरुले चाँडै सफलताको मार्ग तय गर्छन ।
अस्वाभाविक कर जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन : अमात्य
तीजमा ‘जमेकी’ शितलकी ‘महारानी’ - २०७५ साउन २२